လူမှုရေး၊ မိုဘိုင်းကမ္ဘာတွင်အကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေး | Martech Zone
အကြောင်းအရာတွေမပါ ၀ င်တဲ့စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလောကမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့စကားဝိုင်းရှိမရှိမသေချာဘူး။ ဒီအဆင့်မှာပြchannelနာပေါင်းစုံအကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးမဟာဗျူဟာကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းဖြစ်သည်။ လူအများစုကလက်လျှော့အရှုံးပေးခြင်းနှင့်နတ်ဝင်သည်များကိုတွန်းပို့ရုံသာပြုခြင်း၊ ပရိသတ်တိုင်းကိုဖြန့်ဝေသည့်သတင်းအချက်အလက်တိုင်းတွင်သက်ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာတိုင်းကိုမြှင့်တင်ရန်.
အဆိုပါ Brightcove infographic, လူမှုရေး၊ မိုဘိုင်းကမ္ဘာတွင်အကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းကိုလုပ်ခြင်းအကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးသည်အဘယ်ကြောင့်ထိပ်တန်း ဦး စားပေးဖြစ်ရသည့်အကြောင်းအရင်းနှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်ဝင်စားဖွယ်အချက်အလက်များပါ ၀ င်သည်။ သို့သော်ဒေတာများအရရုပ်သံကဏ္contentစုံစျေးကွက်ရှာဖွေရေးသည်ခက်ခဲသည်။ ပရိသတ်အများအပြားသည်လူမှုကွန်ယက်များ၊ ပလက်ဖောင်းများ၊ မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောတီဗီများပေါ်တွင်ပျံ့နှံ့သွားသည်။ ၎င်းသည်ပလက်ဖောင်းအပိုင်းအစများ၊ မြင့်မားသောဖွံ့ဖြိုးမှုကုန်ကျစရိတ်များနှင့်ရှုပ်ထွေးစေသည် analytics စျေးကွက်။
အချက်အလက်အပြည့်အစုံကိုကြည့်ပါ မင်္ဂလာပါ။ အကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်များသုတေသနစာတမ်းအပြည့်အစုံကိုသင်ရယူနိုင်ပါသည် http://go.brightcove.com/forms/brand-research-bundle.
Tags: အလင်းရောင်Cross- ရုပ်သံလိုင်းအကြောင်းအရာCross-channel စျေးကွက်ရှာဖွေရေးမိုဘိုင်းအကြောင်းအရာဗီဒီယိုကိုအကြောင်းအရာ
Plurro သည်သင်၏လက်လီရောင်းဝယ်မှုလုပ်ငန်းသို့ Cash Mob ကိုယူဆောင်လာသည်